साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर (समाचार पुरा हेर्नुहोस) - ePosttimes
[ १७ असार २०७९, शुक्रबार ११:५७ ] भोजपुुरमा १५ हजार बढीको म्याद गुज्रिएका सामान बरामद	समाचार
[ १५ असार २०७९, बुधबार १५:२९ ] सांसद सुदन किरातीद्धारा चम्पेका १२ जना जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान	गाउँ घर
[ १४ असार २०७९, मंगलवार ०६:५३ ] अल्ट्रा धाविका मिरा राईको गाउ सानोदुुङमामा ट्रेल रेस प्रशिक्षण	खेलकुद
[ १२ असार २०७९, आईतवार ०७:११ ] भोजपुर नगरपालिकाको बजेट ६२ करोड १३ लाख १३ हजार	गाउँ घर
[ ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०८:४० ] नेकपा माओबादी केन्द्र भोजपुरले अन्तरघात गर्ने नेता कार्यकतालाई कार्वाही गर्ने	गाउँ घर
[ ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०४:४३ ] भोजपुुरमा काँग्रेसबाट निर्बाचित जन प्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण दिईने	गाउँ घर
[ ३० जेष्ठ २०७९, सोमबार १४:३२ ] भोजपुुरमा नियमित बिद्युत आपुुर्ति नहुदा उपभोक्ता मारमा	गाउँ घर
[ २९ जेष्ठ २०७९, आईतवार १६:१४ ] नेपाल टेलिकमको आईपी टिभी सेवा अब मोबाइलमा पनि	सुचना तथा प्रविधी
[ २९ जेष्ठ २०७९, आईतवार ११:३३ ] वडाध्यक्षले दिए सय जना बिद्यार्थीलाई निशुुल्क बिद्यालय पोशाक	गाउँ घर
[ २८ जेष्ठ २०७९, शनिबार १५:०० ] भोजपुुरको जिसस प्रमुुख र उप-प्रमुखमा कमल थुुलुुङ र अनिशा खड्का बिजयी	मूख्य समाचार
[ २६ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०४:५९ ] भोजपुरको जिससको निर्वाचनमा काग्रेस र एमालेका दुई राई बिच प्रतिस्पर्धा हुदै	मूख्य समाचार
[ २५ जेष्ठ २०७९, बुधबार १४:२२ ] आम नागरिकको हरघरमा चेतनाको बाजा बज्नुु पर्छ : मेयर आले	गाउँ घर
[ २२ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०९:२८ ] शिक्षा छात्रवृत्तिमा महिला, बालबालिका र किशोरीहरुको अवस्था	स्टोरी
[ १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार १४:३५ ] भोजपुर नगर कार्यपालिकाको निर्वाचनका गठबन्धन दलका बहुुमत सदस्य बिजयी	गाउँ घर
[ १७ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०३:१८ ] भोजपुुरमा ७९ जना आँखाका रोगीको मोति बिन्दुको नि शुुल्क शल्यक्रिया	गाउँ घर
[ १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १६:०१ ] डा.सुनिल शर्माले मिलाइदिए गाउँघरमै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था	समाचार
[ १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १५:५५ ] भोजपुरको टेम्के मैयुङ गाउपालिका स्थित दुई दिने आखा शिविरमा ४९ जनाको मोतिया विन्दूको निःशुल्क शल्यक्रिया गरीयो	गाउँ घर
[ १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १३:५७ ] वडाध्यक्षामा निर्वाचित स्वतन्त्र उमेरदवार तामाङले गरे आत्माआलोचना	गाउँ घर
[ १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ११:३७ ] भोजपुरको अन्नपूर्णमा दुुई दिने आखा शिविर शुुरु	गाउँ घर
[ १० जेष्ठ २०७९, मंगलवार १४:३९ ] सुुर्य लाइफ ईन्स्योरेन्स भोजपुुर द्वारा १० लाख बढीको मृत्युु दावी भूक्तानी	समाचार
सुचना तथा प्रविधी
फोटो ग्यालरी (Gallery)
स्थानीय उप निर्वाचन
१ नम्बर प्रदेश
उपयोगी अनलाइन लिङ्कहरु
Homeसमाचारसाढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर (समाचार पुरा हेर्नुहोस)
साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर (समाचार पुरा हेर्नुहोस)
१८ मंसिर २०७६, बुधबार १०:३७ समाचार 0
काठमाण्डौ । कोरियाली कम्पनि एसवाई प्यानलले आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्यानलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् ।
बिभिन्न रंगको छाना र वाल २ देखि ६ इन्चीसम्म बाक्लो उत्पादन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। शतप्रतिशत कोरियन प्रबिधि र लगानीमा स्थापना गरिएको सो कम्पनिको उत्पादनहरु भुकम्प प्रतिरोधी,सस्तो ,६० बर्ष टिकाउ हुने जनाइएको छ ।
७२ करोड रुपैयाँ अधिकृत पुंजी रहेको सो कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक प्रबिधिद्वारा प्यानल उत्पादन शुरु गरिएको जनाइएको छ । कम्पनिद्वारा उत्पादन हुने छाना र वाल गर्मि क्षेत्रका लागि बरदान हुने जनाइएको छ ।
सो छानाले ८ देखि १० डीग्रीसम्म तापक्रम रोक्न सहयोग गर्छ। यो प्रविधिले चितवन लगायत तराइबासिलाई गर्मिबाट बच्न ठुलो सहयोग गर्ने छ । त्यसैगरी पहाडी र हिमाली भागमा बसोबासीका लागि पनि बरदाननै साबित हुने छ ।
१२ सय डिग्रीको तापक्रम कलर कोट गरिएको स्टील दुई तिर र बिचमा पोलिट़ाइरोन इन्सुलेसन गरिने भएकोले यो प्यानलले चिसो तातो रोक्न मद्दत गर्दछ । ४३ जिल्लामा डिलर वितरण गरिसकेको र कोल्डस्टोरको लागि चाहिने प्यानलसमेत उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले आधुनिक प्रविधिमै स्टीलको ढोका र यूपिभिसी झ्याल समेत उत्पादन तयारी गरिरहेको छ । एउटा सामान्य कारको मुल्य बराबरमा साढे २ तला सम्मको घर निर्माण हुन्छ ।
सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त भएका घर निर्माणको लागि दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥र्यो । यो घोषणापछि धेरैले आलोचना गर्दै भने, दुईलाख दिएर पनि घर बन्छ ? सामान्य रुपमा हेर्दा दुई लाख सानो रकम हो ।
यति थोरै पैसाले कहाँ घर बन्ला ? तर दशकदेखि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर घर बनाइरहेको एउटा कम्पनीले डेढ लाखमा घर बन्ने दावी गरेको छ । हिमालयन ब्याम्बो प्रालि जसले डेढ लाखमै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने दावी गरेको छ ।
कोठाको घर डेढ लाखमै निर्माण गर्छौ । मुलुकभित्रै रहेको बाँसबाट राम्रो घर निर्माण गर्न सकिन्छ,’ कम्पनीका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बिजमान्डूसँग भने, ‘घर निर्माणमा विदेशी सामानको प्रयोगनै गर्नुपर्दैन । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग हुने भएकोले सस्तो भएको हो ।’
भूकम्पपछि सस्तो, छिटो र सजिलोसँग घर निर्माण गर्न चासो बढेको छ । छिटो र सस्तो निर्माणका लागि यस्ता घर उत्तम हुन्छन् । कम्पनीले एक महिना भित्रै घर निर्माण गरेर ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने दावी गरेको छ । १५ दिनमा फाउन्डेसन र १५ दिनमा घरनै निर्माण सकिने जानकारी पनि कम्पनीले दिएको छ ।
‘हामी ग्राहकले चाहे अनुसारको घर निर्माण गर्न सक्छौ । न्यून, मध्यम र उच्च आय भएका ग्राहकको माग अनुसार घर निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छ,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘तर अहिलेको आवश्यकता भनेको भूकम्प पीडितको पुनस्र्थापनाको हो । त्यसैले डेढ लाख र साढे तीन लाख रुपैयाँको घरलाई बढी लक्षित गरेका छौ ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले बाँसको घरको बारेमा जानकारी लिइसकेको छ । कम्पनीले एक हजार घर निर्माण गर्नसक्ने जानकारी एनआरएनलाई दिएको छ ।
कसरी बन्छ घर ?
अरु घरजस्तै फाउन्डेस ढुंगा, सिमेन्ट र ईटाबाट तयार गरिन्छ । फाउन्डेसन तयार भएपछि बाँसबाटै विम, चौकस लगायतका सम्पूर्ण सामाग्री तयार हुन्छ । कम्पनीले घरको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री हेटौंडामा रहेको आफ्नो उद्योगमा तयार गर्छ । फाउन्डेसन तयार भएपछि उद्योगबाट सामान ल्याएर प्राविधिकले जोड्ने काम गर्छन् । घरको छानामा टिन प्रयोग गरिन्छ भने भित्तामा बाँस प्रयोग हुन्छ । बाँसको भित्तामा सिमेन्टले प्लास्टर गरिन्छ ।
३० वर्ष आयु
कम्पनीले बाँसबाट निर्माण भएको घरको आयु ३० वर्षको हुने दावी गरेको छ । ‘यो घरको ग्यारेन्टी ३० वर्षको गरेका छौ । तर यो भन्दा बढी पनि टिक्छ,’ जोशीले भने, ‘ घर निर्माणलाई दिगो बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।’
घर बनाउँदा प्रयोग हुने बाँसको आवश्यक ट्रिटमेन्ट गरिन्छ । कम्पनीका अनुसार ट्रिटमेन्ट गरेपछि बाँसमा किरा लाग्ने समस्यानै हुँदैन । यस्तो बाँसमा धुलिया लाग्ने समस्या पनि हुँदैन । बाँस आफै इन्सुलेटेड भएकोले विग्रिने समस्या पनि कम हुन्छ ।
कहाँ छन् यस्ता घर
कम्पनीले अहिलेसम्म एक हजार घर बनाइसकेको छ । कम्पनीले व्यक्तिगत, गैरसरकारी संस्था, विद्यालयलगायत लागि यस्ता घर बनाएको हो ।
कम्पनीले तीन सय स्क्वायर फिटको मुक्त कमैयाको क्याम्प, विराटनगरमा पाँच सय ८० स्क्वायर फिटको निजी आवास, मेलम्चीमा रिम्स नेपालको एक हजार स्क्वायर फिटको घर र एक हजार स्क्वायर फिटको ट्रेनिङ हल, आठ सय ८० स्क्वायर फिटको भवानी एकीकृत स्कुल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुर्खेतमा टे«ड स्कुल, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको ट्रेनिङ हललगायत निर्माण गरिसकेको छ ।
156500cookie-checkसाढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर (समाचार पुरा हेर्नुहोस)yes
Post Views: 1,906
वडाध्यक्षमा नेकपाका उमेरदवार जितेन्द्र राई विजयी
धरानका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख तिलक राईद्वारा पदभार ग्रहण, करलाई व्यवहारिक र बैज्ञानिक बनाउने
सबै भन्दा धेरै पढिएको
सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स धरानमा खैलाबैला, सामाजीक कार्य गर्ने नाममा भानुचोकमा भोट मागेको आरोप (posttimes) (6,632)
हतुवागढी गाउँपालिकाका एक युवकमा कोरोना (आरडीटी) टेष्टमा पोजेटिभ देखियो (posttimes) (6,164)
हतुवागढीको मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक योजना निर्माणमा ठेकदारको लापार्वाही, अन्य योजनाहरु भीडको चिण्डो यता न उति (posttimes) (5,885)
हतुवागढ़ी गाउँपालिकाले कोरोन भाइरस रोकथाम राहतकोष स्थापना गर्यो, सीमाक्षेत्रमा कडा निगरानी गरिने (posttimes) (5,100)
बैसाख महिनाको उत्कृष्ट प्रहरीमा प्रहरी निरिक्षक जस बहादुर लिम्बु घोषित (posttimes) (4,574)
कोरोना भाइरसबारे थाहा पाउनु पर्ने ९ तथ्य सामग्री यस्तो छ (posttimes) (3,899)
रुँदै बिदा गरिदै नाटक ‘बसाइँ’ (posttimes) (3,766)
भोजपुुरमा १५ हजार बढीको म्याद गुज्रिएका सामान बरामद
सांसद सुदन किरातीद्धारा चम्पेका १२ जना जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान
अल्ट्रा धाविका मिरा राईको गाउ सानोदुुङमामा ट्रेल रेस प्रशिक्षण
भोजपुर नगरपालिकाको बजेट ६२ करोड १३ लाख १३ हजार
नेकपा माओबादी केन्द्र भोजपुरले अन्तरघात गर्ने नेता कार्यकतालाई कार्वाही गर्ने
भोजपुुरमा काँग्रेसबाट निर्बाचित जन प्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण दिईने
भोजपुुरमा नियमित बिद्युत आपुुर्ति नहुदा उपभोक्ता मारमा
नेपाल टेलिकमको आईपी टिभी सेवा अब मोबाइलमा पनि
वडाध्यक्षले दिए सय जना बिद्यार्थीलाई निशुुल्क बिद्यालय पोशाक
भोजपुुरको जिसस प्रमुुख र उप-प्रमुखमा कमल थुुलुुङ र अनिशा खड्का बिजयी
भोजपुरको जिससको निर्वाचनमा काग्रेस र एमालेका दुई राई बिच प्रतिस्पर्धा हुदै
आम नागरिकको हरघरमा चेतनाको बाजा बज्नुु पर्छ : मेयर आले
अघिल्लो खवरहरु Select Month July 2022 (1) June 2022 (13) May 2022 (34) April 2022 (6) March 2022 (4) February 2022 (14) January 2022 (6) December 2021 (3) November 2021 (3) October 2021 (2) September 2021 (2) August 2021 (6) July 2021 (14) June 2021 (3) May 2021 (16) April 2021 (12) March 2021 (15) February 2021 (12) January 2021 (12) December 2020 (5) November 2020 (13) October 2020 (19) September 2020 (33) August 2020 (41) July 2020 (28) June 2020 (35) May 2020 (113) April 2020 (157) March 2020 (89) February 2020 (42) January 2020 (36) December 2019 (38) November 2019 (54) October 2019 (29) September 2019 (7) August 2019 (6) July 2019 (12)
कक्षा १२ को परीक्षा साउन ३१ देखि
धरानमा भदौ ४ गतेदेखि १० दिन पुर्ण लकडाउन गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय: तरकारी पसल पनि खोल्न नपाइने
ट्याब क्लिक गर्नु होस्
२२ औ बुढ़ासुब्बा गोल्ड कप
Design and updated by ePosttimes.com